काठमाडौं । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा काठमाडौंकी नेतृ गंगा सुनारले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने भएकी छिन् । उनले दलित महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन लागेको बताइन् ।
‘पार्टीमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । मैले लामो समयदेखि दलित समुदायको हक, हित र शशक्तिकरणका लागि काम गर्दै आएकी छु । पार्टीका संगठनमा बसेर पनि काम गरिसकेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘यो महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा आफूलाई उभ्याउने तयारी गरेकी छु ।’
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–७ की ३७ वर्षे सुनार समाजशास्त्र र राजनीतिक शास्त्रमा स्नातक हुन् । काठमाडौंमा नेता प्रकाशमान सिंहसँग निकट उनी काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ बाट दोस्रो पटक महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएकी छिन् ।
उनी हाल काठमाडौं दलित संघकी अध्यक्ष समेत हुन् । ‘दलित समुदायको पेशा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, बैज्ञानिकीकरण र संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, पछाडि पारिएको हाम्रो समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र राजनीतिक चेतनाको विकास गराएर अघि बढाउनुपर्नेछ, मेरो उम्मेदवारी त्यसैका लागि हो,’ उनले भनिन् ।
०६२ सालमा कांग्रेसको इकाइ समिति सदस्य भएर काम गरेकी सुनार दोस्रो जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भइन् । उनी दलित संघको साधारण सदस्य भएदेखि निरन्तर कार्यरत छन् ।
०६० सालमा संघको जिल्ला सदस्य भएकी उनी ०६४ मा सहसचिव, ०६७ सालमा सचिव, ०७० सालमा पुनः सचिव भएर काम गरेपछि ०७४ सालमा संघको जिल्ला अध्यक्ष बनेकी हुन् । उनले आफू जिल्ला अध्यक्ष हुँदा पार्टीको विधानमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आन्दोलित हुनेदेखि विभिन्न गतिविधि गरेको बताइन् ।
उनले काठमाडौंमा पहिलो पटक ०७५ साल बैशाख २२ गते सहभोजको आयोजना गरेकी थिइन् । ‘काठमाडौंमा पनि जातीय विभेद हटेको छैन । हामीले दलित संघको आयोजनामा त्यो बेला सहभोजको आयोजना गरेर समाजमा सबै समान हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ,’ उनले भनिन् ।
उनले आफू संघको जिल्ला अध्यक्ष भएपछि पटक–पटक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दलित विद्यार्थी सम्मान तथा प्रोत्साहन लगायत कार्यक्रम गरेको बताइन् ।
माेरङ । नेपाली कांग्रेस माेरङकाे सभापतिमा संस्थापन इतर समूहका डिगबहादुर लिम्बू निर्वाचित भएका छन् । आज भएको दाेस्राे चरणको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र नेता कृष्णप्रसाद सिटाैलाकाे संयुक्त समर्थन रहेका दिलिप गच्छदारलाई पराजित गरेदै लिम्बू विजयी भएका हुन् ।
लिम्बू नेता डा. शेखर काेइराला निकट हुन् । लिम्बूले १ हजार ९ सय ६ मत ल्याउँदा गच्छदारले १ हजार ४ सय २२ मत ल्याए । पहिलो चरणमा तेस्रो भएका उम्मेदवार यदु विष्टले समर्थन गरेपनि गच्छदारले जित हात पार्न सकेनन् ।
Tue, 11/30/2021 - 21:26
Tue, 11/30/2021 - 21:05
चितवन । नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बसेर सकिएकाे छ ।
सपथग्रहणपछि बैठक चिवतनको सौराहामा बसेको हो । बैठकले निर्णय भने केही पनि गरेन् । बैठकलाई केपी शर्मा अ‍ोलीले सम्बोधन गरेका छन् ।
सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको तयारीका लागि तीन महिना मात्रै बाँकी रहेकाले सोही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।
अन्तरविरोध पार्टीका लागि कति खरतनाक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि जिम्मेवारीबाट थिचिएर अगाडी बढ्नुपर्ने उनले उनले भने, ‘आपसको अन्तरविरोध कति खतरनाक हुन्छ, भन्ने हामी थाहा पाएका छौँ । साथीको बात सहन सकिएन भने शत्रुको लात खान सकिन्छ । हामीमा उन्माद चढ्नु हुँदैन । जिम्मेवारीबाट थिचिएर अघि बढ्नु पर्छ।’
केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक मंसिर २५ र २६ गते बस्ने पनि उनले जानकारी दिए । सोही बैठकबाट पोलिट ब्यूरो, स्थायी कमिटी निर्माण र जिल्ला तथा प्रदेश कमिटी अधिवेशन कार्यतालिका बन्ने उनले बताए ।
ओलीले अब १० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्य नियुक्त हुने पनि बताए ।
यस्तै बागमती प्रदेश कमिटीले नवनिर्वाचित केन्द्रस्यहरुलाई २४ गते स्वागत गर्ने भएको छ ।
Tue, 11/30/2021 - 20:41
इटहरी । नेकपा (एमाले) को दसौं महाधिवेशनमा चुनाव लढेका एमाले पूर्वसचिव भीम आचार्य दम्पत्ति नै पराजित भएका छन् ।
सात सचिवका लागि भएको चुनावमा भीम आचार्यले आठौँ धेरै मत ल्याए । आचार्यको मत ७८८ आयो भने उनी भन्दा थोरै कम चीनका लागी पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीको ५५९ मत भएको थियो ।
भीम आचार्य पत्नी निरा खनाल समेत चुनावमा हारेकी छन् । प्रदेश १ महिला सदस्यको उम्मेदवार रहेकी खनालले ६१४ मत प्राप्त गरिन् । उनको जित सुनिश्चित भएन् ।
३० पदको लागी भएको चुनावमा प्रदेश १ महिलातर्फ झापाको कमल गाँउपालीकाकी प्रमुख मेनुका काफ्ले, धरानकी उपमेयर मन्जु भन्डारी र पूर्व प्रदेशमन्त्री उसाकला राई विजयी भए ।
Tue, 11/30/2021 - 20:32
चितवन । एमालेमा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी भएर पराजित बनेका भीम रावलले केन्द्रीय सदस्य बस्न अस्वीकार गरेका छन् । मत परिणाम आउनु अगाडि नै उनले आफू अध्यक्ष हारेमा पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
चुनावी परिणामले भने रावललाई केन्द्रीय सदस्यमा विजयी गराएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका ३०१ केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा उनको पनि नाम थियो ।
एमाले प्रतिनिधहरुले अध्यक्षमा भोट नदिए पनि केन्द्रीय सदस्यमा उनलाई भोट दिएका छन् । तर, रावल आफूले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नै नदिएको बताइरहेका छन् ।
निर्वाचन परिणामपछि महाधिवेशनस्थलमा नै सपथग्रहण समारोह आयोजना गरिएको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सपथ गराउँदा रावल कुर्सीबाट उठेनन् । उनले आफू सपथ ग्रहण नगर्ने जानकारी पार्टीको निर्वाचन आयोगलाई समेत गराएका थिए ।
कार्यक्रमपछि सबै केन्द्रीय सदस्यहरु वैठकका लागि गएका थिए । रावल भने एक्लै बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले उनलाई घेरे । सक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै रावलले आफू अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन बाँकी रहेको बताए ।
‘महाधिवेशनका विविध पक्षको विवेचना म काठमाडौंमा गएर गर्नेछु । तर, जुन वातावरणमा मैले जति मत प्राप्त गरेको छु, त्यसलाई महत्वपूर्णरुपमा लिएको छु ।’ उनले भने ।
रावलले आफू केन्द्रीय कमिटी सदस्य नरहेको बताए । निर्वाचन आयोगलाई आफूले अध्यक्षमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको जानकारी गराएको भन्दै उनले भने, ‘मैले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदारी नै दिएको छैन भने कसरी निर्वाचित हुन सक्छु ?’
पार्टीका कमिटीमा नबसीकन अब कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘सोचौंला नि भोलीदेखि ।’
रावलले नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक बधाइ दिइसकेका छैनन् । मञ्चमा सँगै बसेर ओलीसँग उनको भलाकुसरी भएको भने देखिएको थियो ।
Tue, 11/30/2021 - 20:10
काठमाडौं । नेकपा एमालेको खुलातर्फको ८४ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा देवी ज्ञवालीले सबैभन्दा बढी १८७७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
चितवनका ज्ञवाली प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालसँगको निर्वाचनमा भरतपुरको मेयरमा उम्मेदवार भएदेखि नै चर्चामा छन् । उनलाई हालै गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्षबाट हटाएको थियो ।
ज्ञवालीपछि दोस्रो लोकप्रिय मत ठाकुर गैरेले पाएका छन् भने तेस्रो लोकप्रिय मत किरण गुरुङले पाएका छन् ।
खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यहरुको मत यसप्रकार छ ।
अग्नि खरेल १७८४
अच्युत मैनाली १७६३
अरुण नेपाल १७८४
कपिलदेव पोखरेल १५७७
कमल चौलागाई १७४०
कर्णवहादुर थापा १७०५
काशिनाथ अधिकारी १८०६
किरण गुरुङ १८११
किरण पौडेल १६४४
किशोरविक्रम मल्ल १७८७
कुमार दशौंदी १६५०
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ १७४५
कृष्ण प्रसाद दाहाल १७११
कृष्ण प्रसाद पौडेल १६७७
कृष्ण वहादुर थापा १७२६
खगराज अधिकारी १७९७
खड्गवहादुर खड्का १५८८
खिमलाल भट्टराई १७६९
गणेश पहाडी १७८१
गणेश ठगुन्ना १७३५
गिरिधारीलाल न्यौपाने १६२९
गुरु बराल १७३०
गोकुल बास्कोटा १७१२
गोरखवहादुर बोगटी १७५०
गोविन्द थापा १६०८
घनश्याम पाण्डे १७२७
घनश्याम भुसाल १२६५
चेतनारायण आचार्य १६५०
चन्द्रवहादुर खड्का १६६२
जगन्नाथ थपलिया १७१६
जीवन घिमिरे १७२२
झपट रावल १७२५
ठाकुर गैरे १८३२
राजन भट्टराइ १७५९
दधिराम न्यौपाने १६४१
दयालवहादुर शाही १७१५
दल रावल १६७२
दिवाकर देवकोटा १६२७
देवराज घिमिरे १७५२
देवी ज्ञवाली १८७७
देवेन्द्र दाहाल १७०३
नरवहादुर धामी १७१८
नवराज रावत १७०४
नारायण सिलवाल १६४४
निर्मल भट्टराई १४८०
पठानसिंह बोहोरा १६४४
परशुराम मेघी गुरुङ १७८३
पार्वत गुरुङ १७९७
पुरुषोत्तम पौडेल १८०६
प्रकाश शाह १७१४
बलराम अधिकारी १६९०
बालकृष्ण ढुंगेल १६६६
भानुभक्त ढकाल १७९९
भीम आचार्य १३९३
भीम कार्की १५९२
भीम रावल ९०४
मणी थापा १६९१
मनोजजंग थापा १५४२
महेश बस्नेत १७२५
माधव अर्याल १६६९
यज्ञराज सुनुवार १७५२
यमलाल कडेल १७२०
रघुजी पन्त १७२५
रविन कोइराला १६०४
रविन्द्र अधिकारी १६९६
राजवहादुर बुढा १६००
राम राना १५४६
राजिव पहारी १६३६
रामशरण बस्नेत १५९३
रामेश्वर फुयाल १६९६
राजेन्द्र गौतम १६३९
रोमनाथ ओली १५२७
लक्ष्मणराज ज्ञवाली १५४९
लक्ष्मी पोखरेल १४६३
विनोद ढकाल १५६१
शिवराज सुवेदी १४११
शेरवहादुर तामाङ १७१०
शेरधन राई १६५६
श्रीप्रसाद जगेबु १३४४
सन्जिव झा १२६८
सुर्य ढकाल १४२३
सुर्य थापा १४८५
सोम मिश्र १४९४
हिक्मत कार्की १५८९
Tue, 11/30/2021 - 20:08
Tue, 11/30/2021 - 20:02
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब तीन महिनासम्म एकीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस्तो एकीकरण अरु पार्टीसँग नभएर कार्यकर्ताहरुको हुने उनको भनाइ छ ।
पार्टीका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको सपथग्रहण समारोहपछि ओली अब एमालेमा अरु पार्टीका कार्यकर्ता प्रवेश गराउने अभियान चलाइने बताए ।
उनले भने, ‘पार्टी–पार्टी भेला गरेर हुँदैन, कार्यकर्ता भेला गर्नुपर्छ । विभिन्न पार्टीबाट कार्यकर्ता हामीले प्रवेश गराउनुपर्छ । यस्तो अभियान सिर्जना गरेर पार्टीलाई माथि उठाइन्छ ।’
यस्तो अभियान कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने केन्द्रीय कमिटीले मिति तय गर्ने ओलीले जानकारी दिए । एमालेको १० औं केन्द्रीय कमिटीको पहिलो वैठक आजै बस्ने पनि उनले बताएका छन् ।
Tue, 11/30/2021 - 20:01
स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो चयन गर्न मंसिर २५ र २६ गते एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने
Tue, 11/30/2021 - 19:59
काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको ‘बिजनेश बैठक’ मंसिर २५ र २६ गते बस्ने भएको छ ।
घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई कामकाजी बनाउनेगरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने बताए । आजै पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक सौराहामा बस्दैछ ।
मंसिर २५ र २६ गते बस्ने बैठकमा व्यवस्थित ढंगले प्रस्ताव लगिने र स्थायी कमिटी तथा पोलिटव्यूरो निर्वाचित गर्ने अध्यक्ष ओलीले बताए ।
नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई ओलीले भने : शालिन हुनुस्, नेता झैं व्यवहार गर्नुस् !
Tue, 11/30/2021 - 19:53
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नयाँ नेतृत्व पंतिलाई बधाई दिएका छन् ।
मतपरिणाम घोषणा र सपथग्रहणपछि बोल्दै ओलीले नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ‘नेता झैं व्यवहार देखाउन’ आग्रह गरे ।
पार्टीका पुराना केन्द्रीय सदस्यहरुले नयाँ आएकाहरुलाई असल तौरतरिका सिकाउन पनि ओलीले दिर्नेशन दिए ।
उनले भने, ‘नयाँले उत्सुकता र जागरुकताका साथ सिक्ने काम गर्न जरुरी छ । नेता झैं व्यवहार गर्नुस । शालिनता र विनम्रताका साथ व्यवहार गर्नुस । घमण्ड र अहंकार छोड्नुस । अहंकारी नेता हुँदैन र नेता अहंकारी हुँदैन ।’
ओलीले आफूहरु जनताका सेवक भएको बताए । विनम्रताका सथा देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हरेक व्यक्तिहरुप्रति हामी सम्मानजनक सहिष्णुताका साथ हामी जान्छौं,’ उनले भने ।
यस्तो बन्यो १०‍औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमाले नेतृत्व (मत परिणामसहित)
Tue, 11/30/2021 - 19:50
काठमाडौं । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
सौराहामा एक कार्यक्रम बीच महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय निर्वाचन कमिटीका अध्यक्ष विजय सुब्बाले मत परिणामसहित अध्यक्षसहित पदाधिकारी, ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगका निर्वाचितहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
एमालेको नयाँ नेतृत्व र प्राप्त मत यसप्रकार छ :
Tue, 11/30/2021 - 19:33
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग लेवनानका अवैतनिक महावाणिज्यदूत एल शेख मोहमद गोजायलले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा उनीहरुबीच लेवनानमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र व्यवस्थापनको बिषयमा छलफल भएकाे हाे ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र लेवनानबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन गोजायलले निर्वाह गरेकाे भुमिकाको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र लेवनान दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन तथा जी ७७ का सदस्य देश रहेकोले विभिन्न बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय फोरममा एकै किसिमका एजेण्डा हुने गरेको स्मरण गरे ।
महावाणिज्यदूत गोजायलले लेवनान सरकारले सरकारी स्तरमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि यसअघि गरेको प्रस्तावबारे निर्णय गर्न आग्रह गरेको बताए । लेवनानमा रहेका नेपालीको सुरक्षा तथा समस्या समाधानका लागि श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हुने गोजायलले बताए ।
श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सरोकारवालासँग वृहत छलफल गरी छिटो टुङ्गोमा पुगिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो समय लेवनान नेपाली श्रमिकको लागि राम्रो गन्तव्य मुलुकको रुपमा रहेको छ ।
नेपाल र लेवनानबीच सन् १९६३ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपालले लेवनानमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत शान्तिसेना पनि पठाउदैँ आएको छ ।
शान्ति सेनाले त्यहाँ रहेका सीमान्त समुदायलाई सहयोग गर्नुका साथै शान्ति स्थापनाको प्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएको छ । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लेवनानको शान्ति प्रकृया सफलताको शुभकामना पनि दिएका थिए ।
Tue, 11/30/2021 - 19:23
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतमलाई एक कार्यक्रम आयोजना गरी बिदाई गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सचिव गौतमले पुर्याएकाे योगदानका लागि धन्यवाद दिदैँ आगामी कार्यकालका लागि शुभकामना पनि दिए ।
बिदाई मन्तव्यका क्रममा गौतमले मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धीको चर्चा गरेका थिए । सचिव गौतमको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएको हो ।
ओलीले सपथ खाए र केन्द्रीय सदस्यलाई खुवाए, रावल उठेनन् (तस्बिरहरू)
Tue, 11/30/2021 - 19:14
काठमाडौं । एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरेका छन् । पार्टीको महाधिवेशनस्थल सौराहामा आयोजित कार्यक्रममा उनले सपथ खाएका हुन् ।
ओलीलाई १०औं महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका संयोजक विजय सुब्बाबाट सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम थियो । यद्यपि, उनले सुब्बालाई नपछ्याइकन आफैं सपथको व्यहोरा वाचन गरेका थिए ।
आफूले सपथग्रहण गरेपछि ओलीले नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सपथग्रहण गराएका छन् । उनले तर, ३०१ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये भीम रावलले भने सपथ खाएनन् । उनले पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा नबस्ने घोषणा गरिसकका छन् ।
Tue, 11/30/2021 - 18:48
काठमाडौं । एमालेको पदाधिकारी प्रतिस्पर्धामा पराजित नेताहरू भीम रावल र घनश्याम भुसाल केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका छन् । अहिले सुनाइएको मतपरिणाम अनुसार उनीहरु केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले ९०४ मत प्राप्त गरेका छन् । घनश्याम भुसालले १२६४ मत ल्याएका छन् ।
रावल अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएका थिए । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका भुसाल पनि हारेका थिए । उनीहरु दुवैलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्यमा भोट दिएका छन् । रावलनिकट नेता झपट रावल पनि केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका छन् । सचिवमा हारेका भीम आर्चा १३९३ मत ल्याउँदै केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । सचिवमै पराजित टंक कार्कीले भने केन्द्रीय सदस्य गुमाए उनले ९०५ भोट ल्याए ।
भीम रावलले भने आफू केन्द्रीय सदस्य नबस्ने बताएको एमाले निर्वाचन समितिका संयोजक विजय सुब्बाले जानकारी दिए ।
परमादेश सत्ता गठबन्धन र न्यायालयबीच राजनीतिक सेटिङ थियो भन्ने पुष्टि भयो : एमाले
चितवन । नेकपा एमालेले असार २८ को सर्वोच्च अदालतको फैसला सत्ता गठबन्धनका नेताहरू र न्यायाधीशहरूको सेटिङमा भएको थियो भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेको बताएको छ ।
१०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित प्रस्ताव बन्दसत्रमा पेस गर्दै एमालेका प्रवक्ता तथा नवनिर्वाचित उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रम असार २८ को फैसलाको बाइप्रडक्ट भएको बताए ।
एमालेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘असार २८ को परमादेश सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको स्वार्थका लागि न्यायालय र राजनीतिक पक्षका बीच भएका सेटिङको परिणाम र राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित फैसला थियो भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।’
एमालेले सर्वोच्च अदालतमा देखिएका बेथितिप्रति खेद व्यक्त गर्दै निश्चित स्वार्थ समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायलाई वञ्चित गर्ने क्रियाकलापको भर्त्सनासमेत गरेको छ ।
Tue, 11/30/2021 - 17:43
काठमाडौं । भीम रावललाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि, एमालेले निर्वाचन परिणामको औपचारिक घोषणा गरेको छैन ।
मतपरिणम घोषणासहित नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको सपथग्रहण कार्यक्रम अहिले आयोजना हुन लागिरहेको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीसहितका साविक पदाधिकारीहरू मञ्चमा छन् । अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा हारेका नेता रावल अध्यक्ष ओलीसँगैको कुर्सीमा बसेका छन् ।
एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्वको लागि प्रयास भए पनि रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारीबाट पछि हट्न चाहेनन् । उनले थोरै भोट ल्याएका छन् । यद्यपि, ओलीको एकाधिकारलाई चुनौती दिने प्रयास गरेको भनेर एमालेवृत्त बाहिरबाट उनको प्रशंसा भइरहेको छ ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले माओवादी केन्द्रका बिन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । उनको सपथ अहिले साढे सात बजे हुने भएको छ ।
सात महिना पहिले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा विष्टलाई सिफारिस गरेपनि अन्त्यमा विष्टलाई सपथ गराइएको थिएन ।
यो सँगै कर्णाली मन्त्रीपरिषद् तीन सदस्यीय बन्ने भएको छ । यसअघि समाजवादकिा चन्द्र बहादुर शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त भै सकेका छन् ।